ဗြိတိန်မှစစ်တမ်း - NSPCC မှစစ်တမ်းအရ ၁၂ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်ကြားလူငယ်များသည်အပြာစွဲစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်နေကြသည် - Your Brain On Porn
ဗြိတိန်စစ်တမ်း: NSPCC စစ်တမ်း porn စွဲစိတ်ပူ 12 နှစ်အရွယ်မှတဦးတည်း-In-တစ်ဆယ် 13 တွေ့ရှိခဲ့
NSPCC စစ်တမ်း porn စွဲအကြောင်းကိုစိုးရိမ် 12 နှစ်အရွယ်မှတဦးတည်း-In-တစ်ဆယ် 13 တွေ့ရှိခဲ့
နောက်ထပ်စစ်တမ်း Pornhub 11 မှ 16 အသက်ယောက်ျားလေးများများအတွက်ထိပ်တန်းက်ဘ်ဆိုက်များကြားတွင်ခဲ့ထင်ရှား
မိဘများက iPad ကိုယူသွားစဉ်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်အိမ်နီးချင်း၏ဝိုင်ဖိုင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
အိမျတျော၌သုံးဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်အတူလီကို Shaw နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းရှိမုန်အနေနဲ့တပ်မတော်အရာရှိ, သူတို့ကအင်တာနက်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်. တိုင်းဖြစ်နိုင်သမျှကြိုတင်ကာကွယ်မှုယူခဲ့ကြောင်းစဉ်းစားမိတယ်။
ယောက်ျားလေးများဖြစ်သော Sally ၏မိခင်များအားည ၁၀ နာရီနောက်ပိုင်းတွင်သူတို့၏အခန်းတွင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးညအချိန်တွင်ဒါဘီရှိအိပ်ခန်းလေးခန်းပါအိမ်ရှိ wifi ကိုပိတ်ထားသည်။
၁၄ နှစ်အရွယ်မMatthewဲတ်သည်ယောက်ျားလေးတစ် ဦး သည် porn ကိုကြည့်ရှုရန်လျှို့ဝှက်စွာပြန်ဖွင့်နေသည်ကိုသူတို့မသိခဲ့ပါ။
၄၁ နှစ်အရွယ်လီလီက 'သူ iPhone ကိုသူရတဲ့အခါသူရဲ့အပြုအမှုပြောင်းလဲမှုကိုငါတို့သတိပြုမိတယ်။ သူကအပေါ်ထပ်မှာအချိန်အများကြီးသုံးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သူကကောင်မလေးရမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။
“ တစ်ညမှာသူနဲ့သူ့အခန်းထဲမှာကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာကိုသူတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သူတို့အားလုံးက iPads ပေါ်မှာတူညီတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတုန်းပဲ။
သူကခုန်တက်သွားပြီးသူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်မယုံနိုင်ဘူး။ '
& Furious နှင့်စိတ်ဆိုး, Sally ရှိမုန်, 43, တစ်ပါတ်မှုအတွက်သူတို့၏သား grounded နဲ့သူ့ဖုန်းနှင့်အိုင်ပက်ကိုယူလေ၏။
သူတို့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ပင်တင်းကျပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်ထားသည့်အတွက်အများအပြားပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပြောဆိုမှုများပြီးနောက်သူတို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာသူတို့ရဲ့အိပ်မက်ဆိုးပဲအစအဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
အချိန်ပြည့်မိခင်စလီက 'သူကကျွန်မတို့ကိုလှည့်ပတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှာလိမ့်မယ်။ သူသည်ဥယျာဉ်၌ဆေးကြောသန့်စင်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
နောက်မှသာသူသည်ဥယျာဉ်အောက်ခြေရှိအိမ်နီးချင်းများ၏ဝိုင်ဖိုင်များကို ၀ င်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
“ ကျနော်တို့ဖုန်းကိုခေါ်သွားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကသူ့ညီမဆီကအိုင်ပက်ကိုရလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကငှားနိုင်တယ်။ သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိုင်ဖိုင်ပေါ်ရှိမိဘထိန်းချုပ်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကုဒ်ကိုသူသိမှပဲ။
'' ကျုပ်တို့ယောက်ျားလေးငါးယောက်ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းရှိတယ်။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏တုံ့ပြန်မှုကိုသူတို့မြင်နိုင်ရန်အတွက်ဤဗီဒီယိုများကိုတွဲဖက်ကြည့်ရှုမည့် 'porn ring' တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ငါတကယ်စိတ်ပျက်စရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူကသူ့ဖုန်းကိုသူ့ဆီကနေအမြဲတမ်းမသိမ်းချင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကျောင်းကိုနှစ်မိုင်စက်ဘီးစီးတာပဲ။ သူ့ကိုလုံခြုံစေချင်တယ်။
နောက်ဆုံးရကိန်းဂဏန်းများအ 81 နှစ်အရွယ်မှ 13 ရာခိုင်နှုန်း 18 ထိုကဲ့သို့သောအိုင်ပက်အဖြစ်တက်ဘလက်ပိုင်ဆိုင်နေချိန်မှာ 43 နှစ်အရွယ်မှ 12 ရာခိုင်နှုန်း 15 တစ်စမတ်ဖုန်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြသပါ။
မိုဘိုင်းဖုန်းများရာခိုင်နှုန်း 58 ယခုအင်တာနက် access ကိုရှိခြင်းနှင့်အတူကလေးများစိုးရိမ်ဖွယ်ရာလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူညစ်ညမ်းရယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
မိဘများသည်ကလေးများအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အန္တရာယ်များကိုမိဘများအားသင်ကြားပေးသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော Carolyn Bunting က 'ကလေးများသည်သိချင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မတော်တဆဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ လိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။
စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအချက်မှာအချို့သောကိစ္စများတွင်လူငယ်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့် fixated ဖြစ်လာရသည်။
အဆိုပါ NSPCC အားဖြင့်နီးပါး 700 သားသမီးများ၏တစ်ဦးကစစ်တမ်းပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကတဆယ်အတွက်တစ်ဦးထက်ပိုလုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကဗီဒီယို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရပြီစဉ်နီးပါးတဦးတည်း 12 နှစ်အရွယ်ဆယ် 13 အတွက်, porn တစ်ခုစွဲရှိခြင်းစိတ်ပူကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ရလဒ်များအရစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့်ငါး ဦး လျှင်တစ် ဦး သည်၎င်းတို့အားတုန်လှုပ်စေသောသို့မဟုတ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဒါဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုကလေးကသက်သာချောင်ချိရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှပဲနောက်ဆုံးပေါ်စစ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘီဘီစီများအတွက်တစ်ဦးကစစ်တမ်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူတို့ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်း porn ကိုမြင်သောအခါလူငယ်များရာခိုင်နှုန်း 60 14 အသက်အနှစ်သို့မဟုတ်အငယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
နောက်ထပ်အစီရင်ခံစာသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်, ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ChildWise အသုံးပြုပုံ Pornhub 11 မှ 16 အသက်ယောက်ျားလေးများအားဖြင့်ထိပ်ဆုံးငါးအကြိုက်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အမည်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်ကဖော်ပြတယ်။
'မMatthewဲကပိုပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးလာတယ်၊ မိသားစုဘဝမှာသူမပါဝင်ချင်ဘူး။ ညစာစားပြီးနောက်စားပွဲမှထွက်ရန်သူမစောင့်နိုင်တော့ပါ။ သူကအရမ်းဆုတ်ခွာဖြစ်လာခဲ့သည်။
'ငါကတခြားယောက်ျားလေးတွေရဲ့မိဘတွေနဲ့စကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဘယ်နေရာမှမရဘူး။ ငါ့ကို“ ငါတို့သားဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး” ဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေအများကြီးရခဲ့တယ်။ '
ငါကျောင်းတက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာမဲကငါ့ကိုစကားမပြောခဲ့ပေမဲ့ဒီနေရာမှာ 'porn ring' အဆုံးသတ်သွားသည်ကိုငါတို့သိသည်အထိ ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်မှာလိင်မှုကိစ္စနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ဘဲအလွန်ရှင်းလင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကလေးများအားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်မှားစေသည်
မိခင်-of သုံး, Sally
စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့်ဆိုလီသည်ကျောင်းသို့ သွား၍ မMatthewဲနှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းများကိုခေါ်သောကျောင်းအုပ်နှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ ယောက်ျားလေးများထဲမှ YouTube သည်ဗီဒီယိုဝေမျှခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အချိန်တွင် 'porn ring' စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။
စယ်လီကဤသို့ပြောပြသည် - 'ငါကျောင်းတက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာမMatthewဲကကျွန်တော့်ကိုစကားမပြောခဲ့ဘူး၊ ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်မှာလိင်မှုကိစ္စနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ဘဲအလွန်ရှင်းလင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကလေးများအားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်မှားစေသည်။
လော်ရာကေးသည်နောက်ထပ်ဆယ်နှစ်အရွယ်တွင်သားဖြစ်သူနာသန်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေသည်ဟုတွေ့ရှိရ။ တုန်လှုပ်နေသောမိခင်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သူမကသူတို့အိမ်ရှိပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာ filter တွေတပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးနေသန်ကိုကြည့်ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သူ့အိုင်ပက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အပေါ်ထပ်မှာအိပ်ပျော်နေတာကိုတွေ့တော့သူဟာတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါငါစိတ်ပျက်သွားတယ်” ဟုအသက် ၁၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော Exeter မှယခုအသက် ၁၃ နှစ်ရှိနေသန်နှင့်နေထိုင်သောလူမှုမီဒီယာမန်နေဂျာလော်ရာကပြောကြားသည်။ ။
'သူငယ်ချင်းဟောင်းတစ်ယောက်ကသူ့ကိုစစ်ထုတ်စက်တွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရမယ်ဆိုတာပြပြီးဒီ site ကိုပို့လိုက်တယ်။ ငါဝမ်းနည်းနေတယ် ငါ့ကလေးလေးရဲ့အပြစ်ကင်းစင်မှုကပျက်သွားပြီ။
နောက်တစ်နေ့မှာငါနေသန်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။ သူကမျက်ရည်ကျပြီးသူကဒါကိုမကြည့်ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်။ '
ယောက်ျားလေးတွေပဲမဟုတ်ဘူး။ ဤသူငယ်ချင်းများမှာ ၁၁ နှစ်နှင့် ၁၂ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးများဖြစ်ပြီး 'C' စကားလုံးကိုအမြဲတမ်းသုံးပြီး 'မင်းငါ့ကိုနင်ထိုးချင်လား' ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်
'ဒီဝေါဟာရကိုသူတို့ဘယ်ကရကြတာလဲ။ ဒီမိန်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်၊ သူတို့ဟာမင်းတွေ့ချင်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူငယ်တွေပါ။ သူတို့ဟာအဲဒီလိုစကားလုံးတွေနဲ့စကားစုတွေကိုသုံးနိုင်တယ်ဆိုတာသင်ဘယ်တော့မှအိပ်မက်မက်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးကအဲဒါကိုလုပ်နေကြတယ်။ '
လော်ရာ၏ပြproblemsနာများမှာမပြီးဆုံးသေးပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဆယ်ကျော်သက် ၆၀ ရာနှုန်းကဲ့သို့နသန်သည်မိမိကိုယ်ကိုလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်တစ်ခုတောင်းခံခဲ့သည်ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူတွေ့ရှိခဲ့သည်။
'မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူ့ကို topless ဓာတ်ပုံတွေပို့ခိုင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်တန်းထားတဲ့အတွက်ငါနေသန်ကျောင်းကိုခေါ်သွားတယ်။
တကယ်တော့မိန်းကလေးကနေသန်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတောင်းဖို့အတွက်သူ ၀ က်ဘ်ပေါ်ကဓာတ်ပုံအချို့ကိုကူးယူပြီးသူမကိုပို့လိုက်တယ်။
'' အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုရပ်တန့်ဖို့လေးနက်တဲ့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းဖို့လိုအပ်တယ်။ မိဘများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းနှင့်ကျောင်းများအကြောင်းစတင်ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်။ ' ရေရှည်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအပေါ်သက်ရောက်မှုမည်မျှရှိသည်ကိုကျွမ်းကျင်သူများကသဘောမတူနိုင်ပါ။ သို့သော်စိတ်ပညာရှင်ပါမောက္ခဂျက်ဖရီဘီတီတီကလူငယ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့သိသည်ထက်ပိုမိုပျက်စီးနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူသည် flashbulb memory ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုအလားအလာနှင့် ပတ်သက်၍ သူအလွန်စိုးရိမ်သည်။ 'ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံများသည်အလျင်အမြန်မေ့သွားတတ်သည်။ သို့သော်မည်မျှပင်ကြိုးစားပါစေကျွန်ုပ်တို့မေ့လျော့လိုသည့်အရာများရှိသေးသည်။
ငါတို့ ဦး နှောက်ထဲမှာကပ်ပြီးဘယ်တော့မှအချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိတယ်။ လေယာဉ်အမြွှာမျှော်စင်တွေထဲကိုတက်သွားတာ၊ ၇/၇ ရက်နေ့ကဘတ်စ်ကားပုံရိပ်ဒါမှမဟုတ် Diana သေဆုံးခြင်း။
“ ခင်ဗျားဘယ်မှာလဲ၊ ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူပြောတာလဲ၊ တခြားသူတွေရဲ့မျက်နှာစာစတဲ့လူမှုရေးအခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုမင်းမှတ်မိနေပြီ။
ဒီကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအမှတ်တရများကို flashbulb memory လို့ခေါ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုလွန်ကဲစေတဲ့ရောဂါ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အချိန်နှင့်အမျှပျောက်ကွယ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါတွေကငါတို့ကလေးတွေနေ့တိုင်းမြင်နေရတဲ့စိတ်ထိခိုက်စရာပုံရိပ်တွေပဲ။ '
Family Lives မှယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ပျော်ရွှင်သောဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး အားမည်သို့ပြုစုပျိုးထောင်ရမည်ကိုရေးသားသူ Suzie Hayman ကဤသို့ဆိုသည် - 'အွန်လိုင်းပေါ်မှာလူငယ်များစွာစွာကြည့်ရှုနေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်လိင်နှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်နွယ်မှုများကိုအချည်းနှီးဖြစ်စေသည်။
“ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ များသောအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာရှိအခြားသူများနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်ရန်အခက်တွေ့နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်အဘယ်သို့ပြုခံရသလဲ? အထက်သို့မုဒိမ်းမှုနှင့်ကျောင်းများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးခံရဖို့ 11 အသက်ကလေးမြားအတှကျအစိုးရသည်မကြာသေးမီကအဆိုပြုအစီအစဉ်များကို။ တစ်ဦးကစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ကောင်းကပ်ကာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာ, သို့သော်ဤသူတို့ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ထဲကနေလေ့လာသင်ယူအရာကိုန်းကျင်ဆွေးနွေးမှုပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤအတောအတွင်းယဉ်ကျေးမှုအတွင်းရေးမှူး Sajid Javid မကြာသေးမီကကလေးများညစ်ညမ်းမှတားမြစ်ခြင်းမရှိသော access ကိုခွင့်ပြုတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှအသက်စိစစ်အတည်ပြုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကတိကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောင်းရွှေ့ကြိုဆိုပါတယ်နေစဉ်, သူတို့မိဘများနေဆဲကာကွယ်ရေး၏ပထမလိုင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်, အလေ့အကျင့်အတွက်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်သတိပေးခဲ့သည်။
“ မိဘများအနေဖြင့်မိမိတို့၏ကလေးများသည်အင်တာနက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်သာကြည့်ရှုနိုင်ရန်အပြုသဘောဆောင်သောခြေလှမ်းများလှမ်းနိုင်သည်။ မိဘများထိန်းချုပ်မှုကိုဘရော့ဘန်းနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ သူတို့၏ဘရောင်ဇာသမိုင်းနှင့်သူတို့ဖုန်းများသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုကြည့်ရှုခြင်းပါဝင်သည်။
လူငယ်တစ် ဦး ကြည့်နေသည့်အရာကိုခြေရာခံသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။ Mobile Force Field ဟုခေါ်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်ကိုမကြာသေးမီကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၎င်းတွင်မိဘများကသူတို့ကလေးများအသုံးမပြုလိုသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုပိတ်ထားပြီးမသင့်လျော်သော selfies များပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုတားဆီးသည်။
သို့သော်အချို့မိဘများအတွက်မူ၎င်းတို့၏ကလေးများကိုကာကွယ်ရန်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည်။ နယူးကာဆယ်မှအသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိသင်ကြားရေးလက်ထောက် Natalie Bridger သည်သူမ၏ ၁၂ နှစ်အရွယ်သား Christopher သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေပြီး၎င်းကိုကိုးနှစ်အရွယ်အစ်မအားပြသခဲ့သည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည့်အခါတုန်လှုပ်သွားသည်။
“ မိသားစုအားလုံးတီဗီကြည့်နေကြတာလွန်ခဲ့တဲ့လေးပတ်၊ ငါးခုကကျွန်မခင်ပွန်းလီနဲ့ကျွန်မသမီးလေးအဘိဂဲလဟာပါးစပ်နားမှာလိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်တာတွေလုပ်ခဲ့တာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်” ဟုနာတာလီကပြောသည်
'ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးသေသွားပြီးသူမဘာလုပ်နေလဲလို့မေးတယ်။ သူမသည် `အိုးဘာမှမရှိဘူး said ဟုပြောသည်၊ သို့သော်သူမ၏သားနှင့်ကျွန် with တော်သိ exchange နေသည့် exchange ည့်သည်ကို caught ဖလှယ်မိသည်။
သူကသူ့ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတယ်၊ ​​အဘိဂဲလ ၀ င်လာပြီးသူမရုပ်ပုံတွေကိုပြသခဲ့တယ်။
'Lee နဲ့ငါအေးသွားတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားမကြာသေးမီအချိန်အထိမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်ကိုမည်သူမျှမသိရှိသေးပါ၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နေဆဲပင်၊ မည်သည့်အရာများကိုပိတ်ဆို့ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရန်လိုအပ်နေသေးသည်။
သူအခုတက်ဘလက်မှာရှိနေတိုင်းသူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိချင်နေတယ်။ သူ၏သမိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူ၏တက်ဘလက်ကိုသူ့ထံမှမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသူထံမှပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည်။ ယခုအချိန်ထိ၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်ပုံရသည်။
ဒါပေမယ့်သူကသူကြည့်တဲ့အချက်ကကျွန်တော့်ကိုထိတ်လန့်စေတယ်။ ကလေးတွေကိုအင်တာနက်ကိုလုံး ၀ မသုံးနိုင်အောင်တားဆီးလို့မရဘူး၊ ဒါပေမဲ့ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူတို့မမြင်ချင်တဲ့စိတ်ရှုပ်စရာပုံရိပ်တွေကမ္ဘာကြီးကိုသူတို့ဖွင့်နိုင်တယ်။
'' သူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲပဲအမြဲတမ်းသူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအမြဲရှာနေပုံရတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေကသူတို့ကိုမထိခိုက်စေနိုင်ဘူးလို့ Natalie သာမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလူငယ်မျိုးဆက်အတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဘယ်လောက်များများကျရောက်နေတယ်ဆိုတာမဖြေရှင်းနိုင်ခင်အချိန်ကသာဒါကပဲ။
သတိပေးချက်တစ်ခု- ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကို အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည် လက်တွဲဖော် လိင်ဆက်ဆံစဉ်တွင် လိင်အင်္ဂါချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။